यी हुन दुबई ह’ल्लाइरहेका एक नेपाली इञ्जिनियर, कुलमानसँग भेटेर देश बनाउने इच्छा ! - Nepal Insider
Home/समाचार/यी हुन दुबई ह’ल्लाइरहेका एक नेपाली इञ्जिनियर, कुलमानसँग भेटेर देश बनाउने इच्छा !
यी हुन दुबई ह’ल्लाइरहेका एक नेपाली इञ्जिनियर, कुलमानसँग भेटेर देश बनाउने इच्छा !
प्रकाश बञ्जारा , यूएई । उमेरले ४६ बर्षका भए वीरगञ्ज स्थायी घर भएका इञ्जिनियर अफजल हुसेन, तर मनमा काम गर्ने ईच्छा भने उनको अल्लारे नै छ । विद्युतीय पावर प्लान्टका क्षेत्रमा १८ वर्षको अनुभव सँगालेका हुसेन जर्मनीको ईलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पनी सिमेन्सका एक्ला नेपाली ईञ्जिनियर हुन्, जो विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेकानिकल पार्टसका साथै तेल तथा ग्यास टर्वाईनका विज्ञ मानिन्छन् ।
भदौदेखि विवाहमा ५१ जना भन्दा बढी जन्ती जान नपाइने
अञ्जना हत्याकाण्डः ब्युटी पार्लर बेचेर क्यानडा जाने तयारीमा थिइन अञ्जना